महाभारतमा १८ अंकको महत्व –१८ दिन चलेको युद्धको अन्तिममा बाँचे १८ जना – Nepali news portal
महाभारतको कथा कौरव र पाण्डबबीचको युद्धसँगै सकिँदैन । वास्तवमा महाभारतको कथा त युद्धपछि शुरु हुन्छ । आजसम्म अश्वत्थामा किन जीवित छन् ? यदुवंशको नाशको श्राप किन दिइयो तथा धर्म किन कलियुगको बाटोमा हिड्यो ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । महाभारतमा केही यस्ता विषयहरु पनि छन् जसबारे तपाई जानकार हुनुहुन्न होला ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि महाभारतमा १८ को संख्याको के महत्व छ ? के यो संयोग हो कि यसमा कुनै रहस्य छ ?
बलिउडका अभिनेता अक्षय कुमारको सम्पत्ति कति छ?
जहाजमा यात्रा गर्ने क्रममा अचेत भएकी रायमाझीको मृत्युमा जहाजको लापरबाही नरहेको प्रस्ट